5 Kalmadood oo ay tahay inaadan ku odhan oo aad ka ilaaliso xaaskaaga | Aayaha
Aayaha editorDecember 13, 2018
Qof walba oo bini aadam ah qalad waa gali karaa balse ma wanaagsana inaad xaaskaaga nabarro iyo boog xanuun badan aad u yeeshid isla markaana aad ku celcelisid.
Inaad ka fiirsato waxa aad ku leedahay xaaskaaga waa muhiim,waxaana jira waxyaabo mudan inaadan waligaa ku dhihin xaaskaaga haddii kale aad si daran u dhaawaceysid.
“Adiga had iyo jeer waad sameysaa…”
Rag farabadan ayaa xaasaskooda ku eedeeya sameynta waxyaabo badan, waxayna dhahaan ,adiga mar walba waad waad sameysaa waxaan, ku hadaaqidda waxyaabahaas oo kale way dhaawacayaan xaaskaaga maxaa yeelay waxay tuseysaa inaad dhinaca xun oo kaliya ka eegtid balse wanaageeda aadan eegin.
“Waxaan ahaay kaligeey…”
Markaad kaligaa iska dhigtid oo xaaskaaga waxba kama jiraan aad kasoo qaadiid, waxaad dhaawacday dareenkeeda mana jirto naag jecel tan, jooji waxyaabahaas oo kale maxaa yeelay taasi sax ma ahan, waxaad ka arkeysaa oo kaliya xagashaada.
“Eeg naagtaan kale…”
Sabab walba xaaskaaga ula bar bar dhigin naag kale, waxaad bur burineysaa niyadeeda oo aad dhaawaceysaa dareemkeeda waxaadna uga tageysaa nabarro qoto dheer oo kuyaali doona muddo dheer.
“Waxaan adigaa u sabab ah…”
Marnaba dusha haka saarin xaaskaaga wax nasiib darro ku dhacay, marnaba haku eedeeyn qalad ka jira guurka ama dhaqan xun ee jira sida ay caadada ka dhigteen rag badan marka jooji eedeeynta xaaskaaga.
“Waxba igama galin…”
Marka aad haweeney u sheegtid inaadan ka wal walin oo aysan waxba kaa galin waad uga guuleysatay sheegidda aad u sheegtay inaadan ka walwalin iyada oo aysan waxbo kaa galin, taasina waa farriinta ugu xun aad siin lahayd xaaskaaga.
Noqo nin kalgaceyl leh oo ka walwala isla markaana jecel xaaskiisa, sidoo kale noqo nin kula hadla hadallo macaan sababtoo ah waa xaaskaaga, xaaskaagana qiimo weyn ayay kuugu fadhisaa.
Su’aalaha Adag Ee La Weydiiyo Qofka Aad Jeceshahay Kahor Intaadan Ismehersanin